बेमौसमी वर्षाले खेतमै भिज्यो धान- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
बेमौसमी वर्षाले खेतमै भिज्यो धान
कार्तिक १, २०७८ भवानी भट्ट, ठाकुरसिंह थारु
कञ्चनपुर, बाँके — आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा भित्र्याउन ठिक्क परेको धान भिजेको छ ।काटेर खेतमै सुकाउन राखेको धानमा बढी नोक्सान पुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डा. दिलबहादुर विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार ७० प्रतिशत धान भित्र्याइसके पनि ३० प्रतिशत खेतमै भिजेको छ ।
कृषकहरुले धान काटेर सुकाउन खेतमा राखेका छन् । कतिपयले खेतमै थुप्रो बनाएका छन् । घर आँगनमा थुपारेका छन् । खेत र आँगनमा थुपारेको धानसमेत भिजेको कृषकहरु बताउँछन् । ‘सबै धान भिजेर सखाप भयो,’ भीमदत्त नगरपालिका ११ का राकेश भट्टले भने, ‘खेतमा पानी जमेर धान बगाउनै लागेको छ ।’
कञ्चनपुरमा ५० हजार हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । यहाँ धानको उत्पादकत्व ४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । ‘अहिले भिजेको धानको बीउ पनि हुदैन,’ डा. विष्टले भने, ‘अझै एक/दुई दिन वर्षा नरोकिए खेतमै उम्रिन सक्छ ।’ उनका अनुसार धेरै धान भिजेका कराण अर्को वर्ष बीउको समेत अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।
यस वर्ष बर्खामा नियमित वर्षा र उन्नत जातको बीउको प्रयोगका कारण धानको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर भित्र्याउने बेलाको बेमौसमी वर्षाले उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७८ १४:२२
कार्तिक १, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — सोमबार सिन्धुपाल्चोकको पाङफुङ केन्द्रविन्दु भएर दुई वटा भूकम्प गएको छ ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेर ४६ मिनेट र १ बजेर ५६ मिनेट जाँदा ४.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । उक्त भूकम्प गोरखा भूकम्पको परकम्प भएको सो केन्द्रले जनाएको छ ।
२०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि हालसम्म नेपालमा ४ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ५६० परकम्प गइसकेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७८ १४:१०